35 ny tarehimarika nentina, izay nahagaga ny hariva fa 67 no nolazain’ny OMS. Ny seraseran’ny fanjakana tany aloha, dia hoe antontan’isa mahazo fanamarinana na “validation” avy amin’ny OMS no azo havoaka, saingy nifanipaka teto. Ilay 32 elanelany ny antony tsy namoahana azy, dia fanapahan-kevitra avy amin’ny Filohan’ny Repoblika noho ny fahitana fa misy zavatra mampiahiahy, raha ny fanazavan’io minisitra io. Ohatra, 33 no nolazain’ny IPM fa nakana singa tamin’ny vantana nanaovana fitiliana (prélèvement) ny 6 mey, ka mahagaga fa 32 izany “positifs” daholo, hoy i Lalatiana Andriatongarivo. Hatramin’izay dia eo amin’ny 60, 65 ary indraindray aza midina ambany be 16,14,… ary ny ambony indrindra dia 201 tamin’ny 28 martsa ihany no maro be. Tampoka teo dia hoe 252 no natao fitiliana. Ny IPM ihany anefa no efa nitondra fanazavana fa 100 hatramin’ny 150 raha be indrindra ka nahoana no tafiakatra 252? Hoy io Minisitra io.
Nanapa-kevitra ny fanjakana hanao fanadihadiana satria misy zavatra tsy mazava. Misy tranga mampiahiahy satria mety tsy vory ny singa ara-teknika sy ara-tsiantifika nahitana an’ireo. Tsy fahadisoana tsotra fa tena miteraka savorovoro ho an’ny firenena izao. Mikorontana ny olom-pirenena, ary miteraka fanohintohina ary voahozongozona ny fahatokisan’ny olona ny fanjakana. Tsy tokony ho azo ekena izany, ary tsy avela mandalo fotsiny raha ny nambaran-dRajoelina, araka ny fanazavan’i Lalatiana Andriatongarivo Mpitondra tenin’ny Governemanta. Asa na misy hidiran’ny politika avo lenta izao na olana ara-teknika fotsiny ihany ?